कुखुराको मासुको मुल्य हालसम्मकै सबैभन्दा बढी – Online Marg
कुखुराको मासुको मुल्य हालसम्मकै सबैभन्दा बढी
Posted on Monday, February 3rd, 2020 2:57 PM Monday, February 3rd, 2020 2:58 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
एक महिनाको अवधिमा कुखुराको मासु प्रतिकिलोे सय रुपैयाँ भन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । गत पुस १ गते प्रतिकिलो २ सय ८० मा पाईने कुखुराको मुल्य यतिबेला प्रतिकिलो ४ सय रुपैयामा कारोबार भईरहेको छ । ह्याचरी उद्योगीहरुले सस्तो मुल्यमा मासु बेच्नुपरेको भन्दै पुसमा गरेको १० दिने आन्दोलनले गर्दा मासुको मुल्य बढेको हो ।
ह्याचरी उद्योगीहरुले मासुले बजार नपाएको भन्दै दश दिन सम्म कुुखुरा उत्पादन ठप्प पारेका थिए । आन्दोलन अवधिभर १५ करोडको चल्ला र ४५ करोडको ह्याचिङ अन्डा नष्ट गरिएको थियो । ह्याचरी उद्योग संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बिसुरालले भने बिगत डेढ बर्षदेखि घाटामा रहेका किसानलाई राहत मिलेको बताए । बिगतमा हेर्दा कुखुराको लागत मूल्य धेरै रहेको भन्दै उत्पादन कम हुँदा मूल्य बढ्नु स्वभाविक रहेको बताए ।
बजारमा कुखुराको तयारी मासुको मुल्य ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपाली बजारमा हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च मूल्यमा कुखुराको मासुको कारोबार भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसरी दशदिनको आन्दोललाई जोडेर व्यवसायीहरु खुल्ला सीमानाबाट कुखुरा ओसारपसार गर्दै यहाँका किसानलाई फेरि पुरानो अवस्थामा फर्काउने अवस्थामा लागेको केहि व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कुखुराको मासुकै हाराहारीमा अन्डाको मूल्य पनि बढेको छ । पुष १ गते ३ सय २० प्रति क्रेटमा बिक्री भएको अन्डा २० दिनपछि ४ सय पुगेको छ । व्यवसायीहरुको सिन्डिकेटले चल्ला र अन्डा नष्ट गरी मुल्य बढाएपछि आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
दानाको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत नउठेको भन्दै किसानले चल्ला नराख्दा भाउ बढेकोे हो । यता, ह्याचरी उद्योगी भने १० दिन चल्ला उत्पादन र अण्डा नष्ट गरेकै कारण मूल्य नबढेको जिकिर गर्छन् । यसरी अस्वभाविक रुपमा कुखुराको मूुल्य बढ्दा अनुगमन गर्ने निकाय बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोत्ता हित संरक्षण विभागले रमिता हेरेर बसेको छ ।
विभागले समयमै पोल्ट्री क्षेत्रका व्यवसायीलाइ बोलाएर छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न उचित कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।
Posted in किनमेलTagged #कुखुराको मासु
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी
सुनको मूल्यमा ऐतिहासिक रेकर्ड
नेपाली बजारमा सुनको बढ्दो भाउले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ । बुधबारका लागि छ�
दुई दिनसम्म स्थिर रहेको सुनको मूल्य मंगलबार भने सामान्य वृद्धि भएको छ । नेप
आइतबार सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । सुनको भाउ आइतबार ७६ हजार
भारतबाट भित्रियो डेढ करोडको गुलाब !
नेपालमा पछिल्लो १ सातामा मात्रै रू १ करोड ६० लाख बराबरको गुलाब आयात भएको छ । �
नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय�
मंगलबार सुनको भाउ घटेको छ । साताको तेस्रो दिन सुनको भाउ घटेका सुनचाँदी व्यव
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार साताको पहिलो दिन आइतबार स्थानिय ब�
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितो�
फेरी बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो तोलाको ?
आज शुक्रबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ । बिहीबार तोलामा दुई सयले बढेर प्रतितोल�